နိုးလော့! | သြဂုတ် ၂၀၀၈
“ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာနေကြောင်း တူဗာလူးနိုင်ငံမှ အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ် ရွာသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဗဲလ်လီစာအား ပြောပြရန် သိပ္ပံဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ မလိုအပ်ချေ။ ၎င်းကလေးဘဝက ရှိခဲ့သည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေများမှာ ကွယ်ပျောက်လာနေသည်။ ၎င်းမိသားစုကို ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခဲ့သည့် ကောက်ပဲသီးနှံများမှာ ပင်လယ်ဆားငန်ရေကြောင့် ပျက်စီးသွားလေပြီ။ ဧပြီလ  တွင် ထူးကဲဒီရေတက်လာသောအခါ လှိုင်းများက ကျောက်တုံးများနှင့် အမှိုက်သရိုက်များကို သယ်ဆောင်လာပြီး ၎င်း၏အိမ်ကို ဖုံးလွှမ်းသွားရာ အိမ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်” ဟုသတင်းစာတစ်စောင် (The New Zealand Herald) ကဆို၏။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၃ ပေသာရှိသော ကျွန်းစုတစ်စုဖြစ်သည့် တူဗာလူးနိုင်ငံမှ လူတို့အတွက် ကမ္ဘာချီပူနွေးမှုဟူသည် သိပ္ပံပညာရှင်များ ပြောဆိုကြသည့်အရာမျှသာမဟုတ်ဘဲ “နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရသော အမှန်တရားတစ်ခု” ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါသတင်းစာကဆို၏။ * ထောင်နှင့်ချီသောလူတို့သည် အဆိုပါကျွန်းများကို စွန့်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ကာ နောက်ထပ် လူပေါင်းများစွာကလည်း ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
ဤအတောအတွင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဘရစ္စဘိန်းတွင်နေထိုင်သူ ရောဘတ်သည် မိမိ၏ပန်းဥယျာဉ်ကို ရေပိုက်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ရေပုံးဖြင့် ရက်အနည်းငယ်လောက်သာ ရေလောင်းပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပြန်လည်သန့်စင်ထားသောရေဖြင့် မော်တော်ကားများကို ဆေးကြောပေးသည့် နေရာသို့ မသွားပါက မိမိကား၏ မှန်၊ ပြတင်းပေါက်နှင့် ကားနံပါတ်ပြားတို့ကိုသာ သူဆေးကြောနိုင်သည်။ ရေအသုံးပြုမှုကို အဘယ်ကြောင့် ကန့်သတ်ထားရသနည်း။ ရာစုနှစ်တစ်ခုတွင် အဆိုးရွားဆုံး မိုးခေါင်ရေရှားမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့်နိုင်ငံ၏ ဒေသတစ်ခု၌ ရောဘတ်နေထိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားနေရာဒေသများတွင်မူ ထိုထက်ပင် ဆိုးသေးသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် တူဗာလူးနိုင်ငံတို့တွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများသည် ကမ္ဘာချီပူနွေးမှု၏ အထောက်အထားများလော။
ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ကမ္ဘာချီပူနွေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ လူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဟု လူများစွာက ယုံကြည်ကြ၏။ ဥပမာ၊ ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေသောဒေသများတွင် ရေခဲများ အကြီးအကျယ် အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် ရေများပူနွေးလာခြင်းကြောင့် သမုဒ္ဒရာများကျယ်ပြန့်လာခြင်းတို့က ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကို စိုးရိမ်မှတ်သို့ မြင့်တက်လာစေနိုင်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် များစွာမမြင့်သည့် တူဗာလူးနိုင်ငံကဲ့သို့သော မြေနိမ့်ကျွန်းများ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပြီး အခြားဒေသနှစ်ခုကို ဖော်ပြရလျှင် နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တို့ရှိ ဒေသအတော်များများလည်း ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ရှန်ဟိုင်း၊ ကာလကတ္တားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဒေသများစွာရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော လူတို့သည်လည်း မိမိတို့၏နေအိမ်ကို စွန့်ပစ်ရဖွယ်ရှိပြီး မဖြစ်မနေ ပြောင်းရွှေ့ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အပူချိန်တိုးလာမှုကလည်း ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများ၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့် မိုးခေါင်ရေရှားမှုများကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးများတွင် မြစ်ချောင်းကြီးငယ်စုခုနစ်စု၏ ရင်းမြစ်ဖြစ်သော ရေခဲမြစ်ကြီးများ ကွယ်ပျောက်သွားမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ရေချိုရှားပါးလာနိုင်၏။ ထို့အပြင် အများအားဖြင့် ရေခဲပြင်တွင်သာ အစာရှာဖွေစားသောက်ကြသည့် ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများအပါအဝင် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ် ထောင်ပေါင်းများစွာမှာလည်း ဘေးသင့်နေကြ၏။ အမှန်မှာ ဝက်ဝံများစွာသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းနေပြီး ဝက်ဝံအချို့မှာ ငတ်မွတ်နေကြသည်ဟုပင် သတင်းများက ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အပူချိန်တိုးလာမှုက ခြင်၊ မွှားနှင့် မှိုအပါအဝင် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သော အခြားအဏုဇီဝရုပ်များကြောင့်ဖြစ်သည့် ရောဂါများကို အခြားဒေသများသို့ ပိုမိုပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေနိုင်ပါသည်။ “ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များသည် နျူကလီးယားလက်နက်များကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များနီးပါးလောက် ကြောက်စရာကောင်းသည်။ လတ်တလောဆိုးကျိုးများကို တွေ့မြင်ရန်ခက်ခဲမည် . . . ဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆယ်စုနှစ် သုံးလေးခုကျော်တွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲက အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ မှီခိုအားထားနေရသော ဒေသကြီးများကို ပြုပြင်၍မရတော့လောက်အောင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည်” ဟုသိပ္ပံစာစောင်တစ်စောင် (Bulletin of the Atomic Scientists) ကဆို၏။ ကမ္ဘာချီပူနွေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အပြောင်းအလဲများသည် မိမိတို့ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာနေသောကြောင့် အခြေအနေမှာ ပို၍ပင် ဆိုးဝါးလာနေသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်တချို့က ယူဆကြသည်။
အဆိုပါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သင့်ပါသလော။ ကမ္ဘာ့သက်ရှိတို့သည် အမှန်တကယ်ပင် ဘေးသင့်နေပါသလော။ ကမ္ဘာချီပူနွေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းသို့သော ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များသည် အခြေအမြစ်မရှိဟု ဝေဖန်ရေးသမားများက ပြောဆိုကြ၏။ အခြားသူတို့ကမူ အဘယ်အရာကို ယုံကြည်ရမှန်းမသိကြပေ။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်အရာက အမှန်တရားဖြစ်သနည်း။ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်သည် ဘေးသင့်နေပါသလော။
^ အပိုဒ်၊3“ကမ္ဘာချီပူနွေးမှု” ဟူသည် ကမ္ဘာ့လေထုနှင့် သမုဒ္ဒရာများတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်တိုးလာခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီး၏အနာဂတ်သည် မည်သူ၏လက်ထဲတွင် ရှိနေသနည်း
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းထက် ပို၍အင်အားကြီးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
မြေဆီလွှာထဲတွင် အံ့ဖွယ် ပေါင်းစည်းခြင်း
သွေးဆောင်မှုတွေကို ငါဘယ်လို တွန်းလှန်နိုင်မလဲ
‘လူသားများအပေါ်ထားရှိသော သင်တို့၏ ကြီးမားလှသည့်မေတ္တာအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်’
နိုးလော့! သြဂုတ် ၂၀၀၈